Yini ukuletha ku epikinikini
Ukuhamba, Ikhambo Tips
Njengoba sekunama-spring ukufika sezulu efudumele sekuyisikhathi ukuqala epikinikini. Zonke, ngaphandle kokukhetha, nemvelo beckons. Futhi babengekho izimila umoya ohlanzekile, abantu bakuleli dolobha ziqala ukudonsa imizimba amanzi nasemahlathini. Naphezu induduzo sakugcina kusukela kulolo hambo uthola ukujabulela esiphezulu.
Ukubeka, lutho lonakaliswe, kubalulekile ukunquma kusengaphambili ukuthi yini ukuthatha on a epikinikini. Ukuthatha nje ilungelo futhi ungakhohlwa lutho, kuzomele wenze uhlu.
Ekuqaleni kufanele unqume ukuthi uyaphi, ngalokho futhi isikhathi eside kangakanani. Njengomthetho, ziya eholidini ngemoto. Uma uhlose nilala, uzodinga itende noma ama-sleeping bag, izingubo zokulala. Thatha oilcloth ezinkulu. Ukubeka wakhe ngaphansi nesembozo, ungakwazi ukuvimbela it ukuthola ezimanzi. Cabanga ukuthi, kulokho izobe ihlezi. Thatha nje uma alo izihlalo.
Ohlwini "yini ukuthatha eholidini" kumele ibe khona izitsha. Samuntu ekahle kuyoba alahlwayo amapuleti, izinkomishi nezimfoloko. Abakwazi ashiswe noma ilahlwe kude. Cutting ibhodi nemimese kufanele njalo ibe umthwalo wakho. Ngaphandle kwawo awukwazi usike isinkwa, imifino nokunye. Beka sokuval ibhodlela futhi ungakwazi ngikwazi ukuqala ngoba ukudla okusemathinini. amathawula Ordinary esikhundleni ngephepha noma ngezidwedwe. Ukuze kuhlanzwe, uzodinga udoti izikhwama.
Ngokuvamile omunye izimpendulo ngowokuqala umbuzo yini ukusithatha epikinikini, olandelayo - BBQ namalahle omlilo. Ngakho ngeke umsindise nemvelo futhi uzivikele. Ukuze kuvuswe hlupha, uzodinga okufanayo futhi uketshezi ekhethekile.
Cabanga ngalokho bayahamba kuqala ukuphumula, hhayi kuphela lapho. Uma inkampani likhulu ke ukuletha ibhola, ibhola likanobhutshuzwayo, isiginci. Lokhu kuyokunika yokuchitha isizungu kumnandi. Uma othile omthandayo ukudoba ke ubambe nenduku yokudoba. indlebe Fresh, kuphekwe phezu komlilo, hhayi kuphela esiphundu, kodwa futhi ewusizo.
Ngalokho ukusithatha epikinikini, udinga ukukhuluma wonke umuntu uya nawe. Mhlawumbe omunye kukhona imibono ezithakazelisayo.
Ngo Nature kukhona wonke umuntu. Ekuvikeleni izingozi, thatha ikhithi zokuqala zosizo, oxosha izinambuzane sase ilanga. Uma ehamba ngemoto, qinisekisa ukuthi akukho zosizo lokuqala etholakalayo. Thatha amanzi amaningi ahlanzekile.
Pack, uqhubekele ukulungiswa imenyu. Imikhiqizo kufanele ibalwe ukuze anele awo wonke. Kufanele acabangele izintandokazi ukunambitheka bonke abahlanganyeli. Ukudla okonakalayo kungcono hhayi ukuthatha noma wacambalala isikhwama ezipholile.
imikhiqizo athandwa kakhulu epikinikini kuthiwa okusemathinini, ushizi, ngibhema futhi inkukhu ethosiwe, amasosishi inyama wabhaka izithelo. Qiniseka ukuthatha ayo kanye lamanzi esiphethu. Ungakhohlwa ukuzitholela imifino. Kwabo kuyoba isaladi ephelele epikinikini. Ungenzi izitshele kusenesikhathi. Kungcono geza ukulungiselela imifino ekhaya, nokuqeda futhi Tuck ngokwemvelo. Ngakho isaladi ukuthola fresh futhi mnandi.
Yini epikinikini ngaphandle izoso? Ukuze inyama ziphenduké zaba esithambile futhi esihlwabusayo, kubalulekile ukuba bathuthukele marinate. Nokho ukugeza amazambane eluhlaza, ezomile futhi uthathe nawe. Baked emalahleni, kuzoba an amazing side dish ukuze inyama.
Ungakhohlwa usawoti. ukungezwakali kwawo kungenzeka kancane konakalisa kwemizwelo. Kuyasiza ukuba etiye, kashukela candy namakhukhi. Ikakhulukazi uma uthatha izingane zabo nabo.
Uhlu lwalokho ukusithatha epikinikini, ungakwazi ukugcina bese ashona. Ngakho, amacala ngokuzayo kuzothatha isikhathi esincane.
Ngaphambi uhamba ekhaya, bhekisisa sithathe zonke kudoti. Wena thatha ke imizuzu embalwa, kodwa ngokuzayo uyojabula kakhulu ukuba eze ukuhlanzwa net wena.
Ukuhlela ensimini uhambo, khumbula ukuthi umgomo wakho oyinhloko ukuphumula, uxoxe nabangani, kumnandi, imidlalo asebenzayo futhi umane ujabulele nezwe elibazungezile.
Eltz Castle (eJalimane): kanjani lapho? Ama ifotho, incazelo kanye nokubuyekeza
Makalale Thailand Phuket. Izingozi.
Ingatholakala kanjani Schengen visa bebodwa
ECrimea, Spa - lokho izivakashi? ECrimea, Spa: Guest Houses
Ball saseVienna eMoscow: uhlelo namasiko ibhola
Ngaya eYoshkar-Ola: izikhangibavakashi, izithombe kanye nokubuyekeza
I-Tablet "Asus TF300TG": Izici
"Rabbit White" - yokudlela eMoscow. Ikheli, amamenyu, ukubuyekezwa. Rabbit Indawo yokudlela White
Wake wayisebenzisa yini ikhampasi of Bengal amakati
INGENA ISINYENYELA appendicular
Calico (utshani): kuzibuyekezo, izintengo
Propensity Asemphethweni ukudla bese ugcine. Propensity eziseceleni uqede - ifomula
Yini futhi yini ukuwasha noku-rust izingubo ezimhlophe?
Elos-epilation: ukubuyekezwa kanye izibikezelo
Arkhangelsk: Lomonosov lesikhumbuzo. incazelo
Izidingo zohlelo kanye izici ezibalulekile: Dead Island
Hamba Stels Navigator 600: Ukucaciswa, imiyalelo, izibuyekezo, izithombe